बंगलादेशमा अहिले पनि पाकिस्तान विरोधी आन्दोलन जारी ! - नेपाल एक्सन Online News Nepal
Home अन्तराष्ट्रिय बंगलादेशमा अहिले पनि पाकिस्तान विरोधी आन्दोलन जारी !
काठमाडौं । गण पिथुनीले पाकिस्तानी जर्सी र झण्डा ल्याए ढाका जस्तै चटगाउँको जहुर अहमद चौधरी रंगशालामा पनि युवाहरुको प्रतिरोध अटल रह्यो । पाकिस्तानी जर्सी र झण्डा लगाएर कुनै पनि बंगलादेशी नागरिक मैदानमा प्रवेश गर्न नपरोस् भनेर रंगशाला बाहिर विभिन्न संघसंस्थाले सतर्कता अपनाएका छन् । संगठनका कार्यकर्तालाई लखेटेर केही भने मैदानमा फर्किएका छन् ।
संगठनका कार्यकर्ताले आगामी दिनमा पनि मैदानबाहिर पनि प्रतिरोध गर्ने बताएका छन् । देश स्वतन्त्र भएको पचास वर्ष भयो । तर पाकिस्तानी भूत अझै पनि बंगलादेशमा लुकेका छन्। स्वाधीनताको स्वर्ण जयन्ती र विजय दिवसको साथमा धमाकेदार उठेका छन् । बंगलादेश-पाकिस्तान म्याचलाई दृष्टिकोणको रूपमा रोजिएको छ। टी–२० सिरिजमा बंगलादेशी नागरिक भए पनि पाकिस्तानी जर्सी र झण्डा लगाएर मैदान प्रवेश गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । संघले अन्तिम टी–२० मा मैदान प्रवेश गर्न दिए.
त्यस्ता पाकिस्तानी भूतहरूलाई शृङ्खलाभर कडा कारबाही गरिने संगठनका कार्यकर्ताहरूले बताएका छन्। संगठनका एक नेताले भने, “पाकिस्तानी झण्डा र जर्सी लगाएर हाम्रो खेल हेर्न आउनु हाम्रो लागि लाजमर्दो कुरा हो।” पाकिस्तानले पनि व्यवहारमा झण्डा फहराएर हाम्रो देशको कानुनको उल्लंघन गरेको छ । हामी यस्तो घटना दोहोर्याउन दिने छैनौं।
१९७० मा, पाकिस्तानीहरूको अहंकारपूर्ण व्यवहारको कारण चटगाउँमा दुई दिनको खेल रद्द गरियो। उनीहरुको विवादास्पद व्यवहारका कारण त्यस दिन मैदानमा चर्को हंगामा भएको थियो । करिब ४० बंगलादेशी पक्राउ परेका थिए ।
Previous articleथप १२ चिनियाँ कम्पनी अमेरिकी कालोसूचीमा
Next articleपाकिस्तानमा अल्पसंख्यक हिन्दु तथा क्रिश्चियन किशोरीहरुलाई जबरजस्ती इस्लाममा धर्म परिवर्तन